Haa dheh aftida 110 - codadka
Aqri dadaalka aan hayno
dadka reer Oregon waxay isku raaceen: daaweynta, ciqaabta maahan habka saxda ah ee aan wax uga qaban karno
Nala wadaag sheekadaada
Mike Schmidt	, Xeer ilaaliyahay degmada, Multnomah County
“Waxaa la joogaa waqtigii isbeddelka nidaamkeenna amniga bulshada si daroogooyinka aan loogu isticmaalin marmarsiinyo lagu xirayo dadka, gaar ahaan dadka Madoow iyo kuwa asaliga ah ee midabka leh. Shuruucda daroogada ee la marin habaabiyay waxay ku abuureen kala duwanaansho qoto dheer nidaamka cadaaladda. Ku qabashada dadka balwadaha waa ciqaab arxan daran maxaa yeelay waxay ku dharbaaxaysaa rikoodh dembiile ah oo cimri dherer ah kaas oo burburin kara nolosha, sida saxda ah markay u baahan yihiin helitaan wanaagsan oo ku saabsan adeegyada taageerada. Waxaan ubaahanahay inaan badalno qaabkeena. Hoos u dhigida ciqaabta fal dambiyeed ee haysashada daroogada fudud iyo bixinta adeeg daaweyn iyo adeegyo kabasho oo dheeraad ah si dadka looga caawiyo inay noloshooda hore ugu socdaan – kuwani waa labada tiir ee Qiyaasta aftida 110. Fadlan igula soo biir codeynta haa.”
Virginia Camberos	, Agaasime goboleedka dooxada Rogue, Unite Oregon
“Anigoo ah qabanqaabiyaha bulshada, waxaan arkay dad la daala dhacaya, iskuna dayaya inay dhisaan nolol wanaagsan. Waxaan ka caawiyey dadka inay helaan daaweyntooda, laakiin waxaan u baahanahay marin dheeri ah, waana inay jiraan dad dhulka jooga oo dadka la xiriiri kara. Hindisahaani wuxuu maalgelin karaa jagooyinka, sida takhasusleyaasha taageerada asaagga ee sameyn kara isku xirkaas. Anaga deris ahaan waxaan ubaahanahay inaan is caawino, intii aan is xukumi lahayn dadka aad ayay tani baahi ugu qabaan. inta aan xabsiyada ku guri lahayn dadka qabatimay maandooriyeyaasha, taas badalkeeda waxaa buuxin karnaa baahidooda daaweynta.”
Carmen Rubio	, Agaasimaha fulinta, Latino Network ahna Guddiga magaalada Portland oo hadda loo doortay
“Dadka la halgamaya balwadda waxay u baahan yihiin helitaan wanaagsan oo daaweyn ah, uma baahna ciqaab dambiyeed oo kala geyn karta qoysaska isla markaana burburin karta nolosha. Aynu ku guuleysanno hab bini-aadamnimo oo wax ku ool ah oo ku saabsan daroogooyinka Oregon.”
Sonja Mckenzie	, La guddoomiye, guddiga waxbarashada ee iskuulkaParkrose
“Waxaan taageersanahay Qiyaasta 110 maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay in la helo xarun caafimaad oo dheeri ah, soo celinta si loo taageero dadka reer Oregon ee ka soo kabanaya qabatinka maandooriyaha. Heerarka xad-dhaafka ah ee xabsiyada dadka midabka leh sidii loo yarayn xariga uu sababo haysashada xadiga yar ee daroogada ah waxay keeneen wareegga xun ee dhibaatada iyo caqabadaha dib-u-soo-kabashada ee saameynaya awoodda abuurista mustaqbal qoysaskooda. Waxaan aaminsanahay in Qiyaasta 110 ay tahay tallaabo dhab ah oo horay loo qaaday oo lagu bixinayo maalgelin ku filan naxariista, daweynta ku-daweynta mukhaadaraadka daroogada si ay dadka reer Oregon u kobcaan.”
Kayse Jama	, Agaasimaha guud ee laant fulinta, Unite Oregon
“Dadka reer Oregon waxay aaminsan yihiin in nidaamkeena badbaadada guud uu ahaado mid loo siman yahay oo cadaalad ku ah bulshada oo dhan. Si kastaba ha noqotee, Oregon iyo Mareykanka oo dhan, dadka midabka, soogalootiga, iyo qaxootiga waxay la kulmaan takoorid marxalad kasta oo geeddi-socodka ah, gaar ahaan markay tahay daroogada. Taasi waa khalad iyo canaan. Go’aan ka dhigista haysashada daroogada iyo ballaarinta marin u helka daaweynta ayaa gacan ka geysan doonta yareynta farqiga u dhexeeya jinsiyadaha ku jira nidaamkayaga cadaaladda dembiyada, iyo caawinta dhammaan dadka reer Oregon ee la ildaran balwadda. Waxaan taageersanahay Qiyaasta aftida 110, maxaa yeelay waa tallaabo muhiim ah oo lagu gaarayo caddaaladda jinsiyadda ee ka dhex jirta nidaamkeena badbaadada bulshada.”
Babak Zolfaghari-Azar	, Maamulaha Daryeelka Qoyska ee RAHS xubin ka mid ah guddiga Iskaashiga Badbaadada iyo Caddaaladda
“Jiilka koowaad ee ka soo jeeda bulshada reer iiraan ee Maraykanka ah oo ay shaqsi ahaan ay saameyn ku yeelatay nidaamka cadaaladda dembiyada, waxaan u heellannahay la dagaallanka caddaalad darrada ka dhanka ah beelaha la hayb sooco iyo awood siinta codadka isbeddelka. Dadaalkayga iskaa wax u qabso ee ololaha ‘Measure 110’ waa mid ka mid ah siyaabo badan oo aan ugu dagaallami karo waddan iyo dowlad aamin ah oo xasilloon.”
Joe McFerrin	, Agaasimaha Fulinta, Xarunta Warshadaha Fursadaha ee Portland (POIC) & Dugsiga Sare ee Rosemary Anderson
“Daaweynta balwadda ayaa ah jawaabta. ee maahan xalka xeritaan. Muddo aad u dheer, dadka midabka leh ayaa la ciqaabay waxayna in badan ka maqnaadeen xalalka daryeelka caafimaadka iyo daaweynta. Hindisahan ayaa macnihiisu yahay caawimaad dheeri ah iyo taakuleyn ayaa la gaarsiin doonaa bulshada madow noloshoodana waa la horumarin doonaa.”
Qabatinka daroogada waxa uu samayn ku yeeshaa qof kasta.
Qabatinka daroogada waxa uu samayn ku yeeshaa qof kasta. Codkaaga ku biiri
Codkaaga ku biiri
Lagu Bixiyay Daaweyn Dheeraad ah oo loogu talagalay Oregon Ka Wanaagsan: Haa 110